नयाँ वर्ष वि.सं. २०७५ सालको वार्षिक भविष्य र राशिफल यस्तो छ ! (भिडियो सहित)
यस पटक नयाँ वर्ष २०७५ शुरु हुँदा बैशाख १ गते बिहान नेपाली स्टेण्डर्ड समय अनुसार १०ः२३ बजिरहेको हुन्छ । सो समयमा नेपाली आकाशको क्षितिजमा मिथुन लग्न उदाइरहेको हुनेछ । नयाँ वर्ष अर्थात मेषार्क हुँदा जापानमा त्याहाँको स्टेण्डर समय अनुसार १३ः३८ बजे बजेको हुन्छ र त्यतिबेला जापानको टोक्योमा सिंह लग्न उदित भइरहेको हुन्छ ।
यसै गरी पाकिस्तानको लाहोरमा पाकिस्तानी स्टेण्डर समय अनुसार बिहान ०९ः३८ बजिरहेको हुन्छ र मिथुन लग्न नै उदाइरहेको हुन्छ । भारतको मुम्बईमा १०ः०८ बजे नयाँ वर्ष प्रवेश हुन्छ । जतिबेला भर्खर मिथुन लग्न उदाउँदै गरेको हुन्छ भने राजधानी दिल्लीमा मिथुन लग्नले आठ डिग्री पार गरिसकेको हुन्छ ।
विक्रम सम्वतको नयाँ वर्ष हुँदा अर्थात सूर्यले ३६० डिग्री पार गरेर शून्य डिग्रीबाट पुनः आफ्नो यात्रा तय गर्दा सबै ठाऊँमा एउटै लग्न हुँदैन । जुन स्थानमा जुन लग्न उदाईरहेको हुन्छ सोही लग्न सो स्थानको जगल्लग्न हुन्छ । जगल्लग्नको आधारमा वार्षिक फलको विवेचना गरिन्छ ।
यौनिक हिंसा तथा विकृति बढ्नसक्ने, अग्नि एवं भूमि र वायुतत्त्व प्रधान प्रकृतिप्रकोप, दैविक विपत्ति, दुर्घटना, हावाहुरी, आगजनि, वृष्टिअनावृटि आदिको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ । जनस्वास्थ्यमा विभिन्न रोगको संक्रमणले प्रभावित गर्नेछ । परराष्ट्र सम्बन्ध बिग्रन नदिन निकै कोसिस् गर्नुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिक व्यापारमा पनि ह्रास आउनसक्ने आशङ्का देखिएको छ ।
आन्तरिक एवं बाह्य द्वन्दको सृजना हुनसक्छ । सम्बन्ध विच्छेदका गतिविधि तथा घटना बढ्ने छन् । जननिकाय, सामाजिक निकाय आदिका तहतप्कामा गुट्, फुट्, आन्तरिक कलह, द्वन्दजन्य परिस्थिति सृजना गराउने ग्रहको प्रभाव छ । जिम्मेवार पक्षले निकै संयमतापूर्वक आफ्नो कर्तव्य एवं जिम्मेवारीलाई वहन गर्न प्रयत्नशील रहनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
मेष राशि/ Aries (चु.चे.चो.ला.लि.लु.ले.लो.अ.) –
वृष राशि/ Taurus (इ.उ.ए.ओ.वा.वि.वु.वे.वो.) –
वृष राशि हुनेहरूको लागि यो वर्ष आंशिक पक्षमामात्रै अनुकूल रहेको छ । रपनि पूवार्धको तुलनामा उत्तरार्ध केही उपलब्धिमूलक हुनेछ । अत्यावश्यक तथा विशेष काम बनाउन अल्लि बढी परिश्रम गर्नुपर्ने छ । सन्तानकष्टको सम्भावना देखिएको छ । जन्मकालमा सम्बन्धित ग्रह प्रतिकूल भई सन्तानदोष व्यहोर्न परिहेकाहरूको लागि सावधानी अप्नाउन पर्ने देखिएको छ ।
विशेष गरी गर्भवतीहरूले बढी ध्यान पुर्याउन जरुरी हुनेछ । रोग–शोक र कुसंगतको खतरा आवश्यक उपाय अथवा सावधानी अप्नाउनु होला । बढी संघर्ष र कम उपलब्धिको कारण मानसिक उद्दिग्नता तथा उदासिनता बढ्न गइ आस्थाको धरोहरमा ह्रास आउने एवं किंकर्तव्यविमूढताको मनोविज्ञानले प्रसय पाउनसक्ने देखिन्छ । साउन उपरान्त केही सुधार आइ कामकार्य एवं अन्य परिस्थितिमा केही सुधार आउनेछ । वर्षको उत्तरार्ध विवाहयोग्य युवायुवतीको लागि विवाहबन्धनको सम्भावना दह्रो छ ।
मिथुन राशि/ Gemini (का.कि.कु.घ.ङ.छ.के.को.ह.) –
कर्कट राशि/ Cancer (हि.हु.हे.हो.डा.डि.डु.डे.डो.) –
सिंह राशि/ Leo (म.मि.मु.मे.मो.ट.टि.टु.टे) –
कन्या राशि/Virgo (टो.प.पी.पु.ष.ण.ठ.पे.पो.) –
तुला राशि/ Libra (रा.री.रु.रे.रो.त.ति.तु.ते.) –
वृश्चिक राशि/Scorpio (तो.ना.नि.नु.ने.नो.य.यी.यु.) –
वृश्चिक राशिको लागि यो वर्ष धेरैजसो पक्षमा संघर्षप्रद देखिएको छ । हिम्मत पनि नगिराउने र नविराउने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्नुपर्ला । स्थान परिवर्तनको सम्भावना देखिन्छ । विदेशको बाटो हेरिरहेकाहरूको लागि ईच्छा पूरा हुनसक्ने छ ।
घर परिवारबाट टाढा गएर अध्ययन गर्नेहरूलाई उपलब्धि मिल्नेछ । तर बढी आसक्ति गर्ने, महत्त्वाकांक्षा राख्ने गर्दा ससाना कार्यले पनि अल्मल्याउँने, बहाना गर्न मन लाग्ने हुनेछ । अभिष्ट कार्यमा समय दिन नसकिने र अधिक परिश्रममा थोरै उपलब्धिले चित्त बुझाउनु पर्ने हुनेछ । चलिरहेको साविक कामकार्य एवं पेशामा संयमपूर्वक रत्रहनाले धेरथोर लाभै हुनेछ । चञ्चलता र हतारले भने क्षति एवं पश्चाताप गराउन सक्नेछ ।
धनु राशि/Sagittarious (ये.यो.भ.भि.भु.ध.फ.ढ.भे.) –
मकर राशि/Capricorn (भो.ज.जी.जु.जे.जो.ख.खि.खु.खे.खो.ग.गी.) –
तर जन्मसमयमा शनि आदि सम्बन्धित ग्रह अनुकूल अर्थात कारक रहनेको लागि भने प्रतिकूल फल कम घटित भइ आकस्मिक लाभ, पदोन्नति एवं राजमान तथा अधिकार पनि प्राप्ति हुनसक्ने छ । श्रावण पछि सुधार आउने र केही काममा सफलता मिल्ने छ । अत्यावश्यक केही काम तथा व्यवहार सुल्झाउन सकिनेछ ।
वेरोजगारीलाई नोकरी मिल्नसक्ने छ, मेहनत, संयम र धैर्यता पूर्वक बुद्धिले कामलिनु हितकर हुनेछ । संघर्षदायी कार्यमा सफलता मिल्ने छ । श्रमिक वर्गसँगको सहकार्य, झट्ट हेर्दा सफासुग्घर नदेखिने र खासै ईज्जतिलो नमानिएको तर लोक सेवा हुने एवम् सदाचारी कार्यमा सफलता मिल्ने छ । तर, गएको नफर्कने ग्रहगोचर भएकोले सरसापट् तथा लेनदेनमा निकै विचार पुर्याउनु पर्ला । त्याग एवम् ईश्वर प्रणिधानको भावनालाई प्रसय दिएर निष्काम कर्म गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
कुम्भ राशि/Aquarius (गु.गे.गो.स.सी.सु.से.सो.द.) –
कुम्भ राशि हुनेहरूको लागि यो वर्ष समष्टिमा राम्रो छ । अवसरको सदुपयोग गर्ने र नहौंसिने हो भने धेरै क्षेत्रमा उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिनेछ । विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनमा सफलता मिल्नेछ । व्यापार–व्यवसायीका लागि विशेष प्रगतिकारक र कृषक–उद्यमी वर्गको लागि सुख एवम् लाभप्रद समय रहेको छ । राजनीति र समाजसेवा तथा जागिरमा पदोन्नती–प्रगति हुने देखिन्छ । दाम्पत्य एवं प्रेमसुखमा बढोत्तरी हुनेछ ।
विवाहयोग्यका लागि दाम्पत्य सम्बन्ध बाँधिने तथा प्रेमसम्बन्ध मजबुत हुनेछ । जग्गाजमिन एवम् वाहनादिको सुख सुविधा प्राप्ति हुने, सम्मानित यात्रा हुने, शत्रु तथा विपक्षि उपर विजय प्राप्त गर्नसकिने छ । यद्यपि कैफियत धनार्जन तर्फ पनि मन आकर्षित होला कि भन्ने छ जसले पछि पछुतोपनि पार्नसक्नेछ ख्याल गर्नुहोला । सत् धनार्जनबाटै आत्मसन्तुष्टि लिन सकिने छ ।
घरपरिवार एवं समाजमा हुने विशेष धार्मिक कृत्य सम्पादनमा भूमिका दिन सकिने छ । तीर्थयात्रादिको पनि सम्भावना रहेको छ । स्थानीय जातिका (लोकल) गाईको क्षेत्रलाई सहयोग तथा सेवा जन्य कार्यमा भूमिका दिनु अझै विशेष हितप्रद हुनेछ ।
मीन राशि/Pisces (दी.दु.थ.झ.ञ.दे.दो.च.ची.) –
ज्यो.पं. वैद्यराज दीपक सुवेदी
सम्पर्क नम्बर: ९८४१२२३१२६, ९८०३८७९९७८, ४४३१७४७